News 18 Nepal || धरानमा दुई जना कोरोना संक्रमितको निधन, को हुन् उनीहरु ?
धरानमा दुई जना कोरोना संक्रमितको निधन, को हुन् उनीहरु ?
काठमाडौं । धरानमा दुई कोरोना संक्रमित पुरुषको निधन भएको छ । सुनसरी र सप्तरीका दुई पुरुषको निधन भएको हो । खडक नगरपालिका ३ का सप्तरीका ३५ वर्षीय पुरुषको आज बिहान सबा ६ बजे ज्यान गएको हो ।
गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा कोरोना पुष्टि रिफर भएर विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३० गते भर्ना भएका थिए । मिर्गौलाको समस्या रही हप्तामा २ पटक डायलासिस गर्दै र उच्च रक्तचाप रहेको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा निदेश सापकोटाले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, धरान उपमहानगरपालिका १७ का ७० वर्षीय पुरुषको ३० गते राति साढे २ बजे ज्यान गएको हो । प्रतिष्ठानमा उपचाररत संक्रमितमा २८ गते कोरोना पुष्टि भएको थियो । २७ कोरोनाको लक्षण देखिएपछि कोभिड उपचार केन्द्रमा भर्ना गरिएको थियो । यो सँगै प्रतिष्ठानमा ज्यान जानेको संख्या २८ पुगेको छ ।
विदेशमा अलपत्र कुन देशबाट कति नेपाली स्वदेश फर्किए ?
आज शनिबार यी स्थानहरुमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुने
नेपालमा थप १३१३ जनामा कोरोना पुष्टि, ६ जनाले गुमाए ज्यान
जुम्ल्याहा दाजु बितेको २६ दिनपछि भाइको पनि संक्रमणबाट निधन
ललितपुरमा थप तीन जना कोरोना संक्रमितको निधन, को को हुन् उनीहरु ?
नेपालमा थप १४९७ जनामा कोरोना पुष्टि, १७ जनाले गुमाए ज्यान
काठमाडौंमा दिनँहु बढ्दो कोरोना संक्रमण, कुन वडामा कति छन् संक्रमित ?